မထသ လိုင်ကားများ ကားလိုပြောရအောင် မကိုက်ညီပါလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မထသ လိုင်ကားများ ကားလိုပြောရအောင် မကိုက်ညီပါလား
မထသ လိုင်ကားများ ကားလိုပြောရအောင် မကိုက်ညီပါလား
Posted by ကိုမောင် on Jun 16, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
မနေကရန်ကုန်မှာမိုးအရမ်းရွာတာနှင်ကျနော်အိမ်ကကားကိုမယူဘဲတခါတလေပေါလိုင်းကားစီပြီးတရုပ်တန်းဖက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ် ကျနော်အိမ်းကနေကားဂိတ်ကို၃မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရပါတယ် ဒါနဲမိုးကဖွဲဖွဲရွာနေပါတယ် သိတ်မစောင့်လိုက်ရပါဘူးလိုင်ကားရောက်လာပြီးတက်စီးလိုက်ပါတယ် မိုးကလဲအတော်သဲလာတောပါတယ်၎င်းလိုင်ကားမှာဂျပန်ကျအဟောင်းဖြစ်ပေမဲ့တော်လေးကိုအခြေမဲနေပါတယ် အဲဒီလိုမိုးသဲတောခရီသည်အမျိုးသမီတယောက်ကပြူတင်ပေါက်မှန်ချပေးပါလားပြောတော့ ယဉ်နောက်လိုက်ကမရပါဘူးပြောရင်းကျနော်ထိုင်နေတဲ အမိုးအပေါကလေထွက်ပေါက်ကနေမိုးရေယိုကျလာတောမသက်တာနဲကျနော်ထီးကိုဖွင်စောင်းရပါလေရောဗျာ။သြော်ကျနော်တိုခရီးသည်တွေကိုလူမထင်သေးရဲလားလိုတွေမိပါတယ်နောက်ပြီးထိုင်တွေကလဲမစုံကုန်ကုန်ပြောရရင်ယဉ်မောင်းနှင့်ယဉ်နောက်လိုက်တို့ကငပိငချဉ်သိတ်သလိုလူများများတင်နိုင်အောင်ဖြုတ်ထားသည်အတွက်ကားအင်ဂါရပ်နှင့်မတူးဘဲဘိန်လေးဘီးတပ်လှည်ကြီးပေါမှာကျနော်တို့ခရီးသည်တွေထိုင်ရပ်လိုက်ကြပါပေတောသည်၊ ၄င်းယဉ်ကိုတနှစ်တခါဘယ်လိုလိုင်စင်ဝင်သည်ကိုကျနော်သိချင်လိုက်ပါဘိ။ တာဝန်ရှိသည်မထသလူကြီးများလဲကြည်ကြပါအုံးလိုကိုတွေကားပေါမှာထီဆောင်ရခဲ့တဲကျနော်အဖြစ် အဲ ငပိ ဖြစ် ဘ၀လေးပါ
ဘစ်ကား ပေါ်မှာ နေပူတဲ့ အခါ မိုးရွာတဲ့ အခါ ထီး ဆောင်းသွားတာ မြင်ဘူးပါတယ်။
ဘဝအမောလေးတွေ အမြန်ဆုံးပြေပျောက် နိုင်ကြပါစေဗျာ..။
KIMURA ရေ စာကြောင် တွေက ညာဘက်ကို လျှမ်ထွက်နေတယ် ဂျ
အင်း..တော်တော်ဆိုးနေပြီပဲ ဗျ…. ဟိုအရင်တုန်းက လို စစ်ကျန် ချက်ပလက် ဂီယာကို တုတ်ထောက်မောင်းတာ တွေ့ပြီး နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်က ဆင်းပြေး သလိုမျိုး ပြန်ဖြစ်အုံးမယ်… နောက်ပြီးတော့ တချို့ကားတွေ ဘရိတ်ဆီ အစား ချောင်းလျှော်ရည်(shampo)တွေကို ရေဖျော်ထည့်နေတာလည်း ကြာပြီ…
ကိုယ်တော်ချောက အခုမှ လိုင်းကားစီးရတဲ့ ဒုက္ခကြုံဖူးတာမို့လား ကျုပ်တို့က ဒါမျိုး ကြုံနေတာ နေ့တိုင်း နီးပါးပဲ ။ ဒါတောင် ကားကြပ်တဲ့ ပြသနာ ၊ မှတ်တိုင်မှာ အကြာကြီး ရပ်တဲ့ပြသနာ ၊ ဘေးကလူက ချွေးစော်နံနေတဲ့ ပြသနာ၊ ဘေးကလူ မူးပြီး အန်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ မလွတ်တာတွေ ၊ ကလေးတွေနဲ့ ဗလုံးဗထွေးတက်လာတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့ ပြသနာ ၊စပယ်ယာ အဟောက်ခံရတဲ့ ပြသနာ၊ အခွင့်ရေးယူတဲ့ လူတွေနဲ့ ကားအတူစီးမိတဲ့ ပြသနာ… ပြောရမယ်ဆိုလျှင်တောင် စုံစိနေတာပါပဲ … ။
ဒါနဲ့ … စာလုံးပေါင်းတွေနည်းနည်းမှားနေတာနဲ့ အောက်ကမြစ်၊ ၀စ္စနှစ်လုံးပေါက်လေးတွေ ကျန်ခဲ့တယ်နော် ။
အော် မအိတုံ က ဘစ်ကား experience တော်တော်ရှိပုံရတယ်
လုပ်ပါအုံး အတွေအကြုံးလေး ပို.စ်တင်ပေးပါအုံး…
အိပ်ယာထနောက်ကျတဲ့နေ့ ဖယ်ရီမမှီရင် လိုင်းကားစီးပြီး သွားရတာ…တလမှာ သုံးလေးရက်ပဲ ဖယ်ရီမှီတယ်လေ… ။ အထူးကား အမည်ခံ ကားတွေကလည်း စပေါ်ခါစတော့ ခုံအပြည့်ပဲ တင်တယ် ဘာညာနဲ့ နောက်ပိုင်း ငပိအိုးသိပ်သလို ကြပ်ပိတ်အောင်တင်တယ်… ။ မှတ်တိုင်မဟုတ်ပဲ ကားတားစီးလို့ကတော့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ်လောက် ငယ်ငယ်လေးတွေဆိုရပ်ပေးတယ်… ကျွန်မတို့လိုအရွယ်ဆို တင်ရမှာစိုးလို့ မောင်းပြေးတာပဲ … ။ အိပ်ယာထကလည်း နောက်ကျ ပိုသီဖတ်သီနဲ့ အတော် ဆိုးတယ်… ။ ထမင်းချိုင့်ဆွဲ …အိတ်ဆွဲပြီး ပြေးရတာ … ဒီအထဲ သုံးစားလို့ မရတဲ့ ဖုန်းကို စက်ရုံက အရေးတကြီးအလုပ်ကိစ္စပေါ်မှာစိုးလို့လေ အိတ်ထဲထည့်ထားရင် မမိလို့ ကိုင်ထားရသေးတယ်…… ကလေးများလို လည်ပင်းတောင် ချိတ်သွားချင်တယ် ပေါတောတောဖြစ်မှာစိုးလို့ … ။ စိတ်မကြည်တဲ့ အချိန်စပယ်ယာက လာဟောက်လျှင် အဲ့ဒီနေ့တော့ အကုသိုလ်ဝင်တာပဲ … သူတပြန်ကိုယ်တပြန် စကားကတော့ များရပြီ… အဲ့ဒီအချိန်ကားပေါ်မှာ အသိပါလာမလားလည်း မတွေးတော့ပဲ စပယ်ယာတွေ နာအောင်ကို ပြောတော့တာပဲ …။ ပြန်ဆင်းလျှင် ခြေထောက်ပါ ကြိတ်ပြီးသားပဲ … ။ ဘေးကလူ အိပ်ငိုက်တာက တမျိုးနဲ့ ဆိုးလွန်းပါတယ်… ။ အဲ့ဒီအချိန်နောင်တရတယ်…နောက်နေ့ ဖယ်ရီမှီအောင် သွားမယ်လို့ … ။ နောက်နေ့ကျတော့လည်း နောက်ကျမြဲ နောက်ကျတာပါပဲ… ။
ကျမတို့ စက်ရုံသွားတဲ့လမ်းတဲ့ GTC ကလေးတွေ သွားတဲ့လမ်းက တူနေလို့ သူတို့ကလည်း လိုင်းကားစီးပါတယ်.. ။ နားမလည်နိုင်တာ ကျောင်းသား / သူ အတော်များများ မနက်စောစောမှာ ကြပ်သိပ်နေတဲ့ကားကို စီးပြီး ကျောင်းသွားတာပါပဲ… ဖယ်ရီစရိတ်ကပဲ ပိုကြီးလို့လား ဖယ်ရီမထားပေးတာလား မတွေးတတ်တော့ဘူး … ။
လိုင်းကားစီးရတဲ့ ဒုက္ခကတော့ နေစဉ်ကြုံနေရပါ ကားပေါ်မှာ ဒုက္ခရောက်တာကတစ်မျိုး ကားပေါ် မတက်ခင်
အပြေးလေးကျင့် နေရတာကတစ်မျိုး အဟုတ်ပဲ ကားတွေက မှတ်တိုင်မှာ မရပ်ပဲကျော်ရပ်လို့ ပြေးရတဲ့ ဒုက္ခ ကျော်မရပ်ပဲ မှတ်တိုင်မရောက်ခင် ရပ်လို့ပြေးရတဲ့ ဒုက္ခ ဟူးးးးးးးးးးးး မလွယ်ပါဘူးနော် ….
စုံ စုံ နဲ့ မ မ က ကျောချင်းကပ် အမွှာလားမသိ
မဟုတ်ပါဘူး king ရဲ့
အဆင့်မြင့် Air Con အထူးကားတွေပြေးဆွဲနေပါပြီ